Okwu Mmalite nke taya ụkpụrụ ihe ọmụma-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Okwu mmalite nke ihe omuma ihe omuma nke taya
Oge: 2020-08-27 Hits: 31
Tirekpụrụ taya ahụ bụ "uzo" na taya. Enwere otutu ihe omuma ebe a. Kedụ maka ụdị ụdị taya ahụ?
A na-ebipụta taya taya na mgbidi taya ahụ, e nwere ụdị ụzọ nnọchi anya abụọ, dịka 34 * 7 ma ọ bụ 7.50-20. Onye nke mbu bu taya taya ya di elu, nke ozo bu taya di ala. Enwekwara ọtụtụ ihe ịrịba ama, dị ka D maka ụgbọ ala ndị na-enwu ọkụ, F maka ụgbọala ndị na-ajụ ala, G maka ụgbọala ndị a na-ahụkarị, H, L, J maka nnukwu ụgbọala ndị oké ozu. Ọ bụrụ na e bipụtara R na mgbidi taya ahụ, dịka 175R13, ọ pụtara na taya ahụ bụ taya radial, nke obosara ya na ogologo ya dị 175mm (sentimita 6.9), a na-etinye ya na wiil ahụ na dayameta nke 13 sentimita asatọ ( 330mm) na wiilị. A na-esekarị okwu RADIAL.
Tirekpụrụ taya ọkọlọtọ mba ụwa gosipụtara pasent nke ogo ogo na ịdị larịị na millimeters. Tinye ihe ndị a: ụdị ụdị taya, rim dayameta (anụ ọhịa), ndenye ederede (ekwe ka koodu ịdị mma), koodu ọsọ ọsọ. Ọmụmaatụ: na 175 / 70R 14 77H, 175 na-anọchite obosara taya bụ 175mm, 70 na-anọchi anya mbadamba ụyọkọ nke ngalaba taya bụ 70%, ya bụ, akụkụ elu bụ 70% nke obosara, R na-anọchi taya radial, rim n'obosara bụ 14 sentimita asatọ, ibu ndeksi bụ 77, The ekwe ọsọ bụ klas H.
A na-ekewa ụdị taya ndị ahụ n'ụdị ise:
1. Vetical na kehoraizin ụkpụrụ
Uru: Ọ na-amịpụta uru nke arụmọrụ dị mma na mkpọtụ dị ala nke usoro ogologo, na-eburu n'uche ike nke arụmọrụ na-agbanwe agbanwe nke usoro ntụgharị. Ọ nwere ike ịnya ụgbọ ala na arụmọrụ karịa ihe dị ọcha. Ya mere, ụdị ụdị nke a nwere ike ime mgbanwe na ọtụtụ ngwa. Okwesiri maka uzo di ike di iche na uzo nwere uzo okporo uzo. Ọ dịkwa mma maka ụgbọ ala na ụgbọala. Ya mere, ụkpụrụ nke usoro kwụ ọtọ na nke kwụ ọtọ aghọọla ụdị Mainstream.
Ọghọm: Uwe na-adịghị mma na akwa ga-eme.
2. Vkpụrụ kwụ ọtọ
Uru: Thiskpụrụ a nwere njigide njikwa njikwa dị mma, obere nguzogide ntụgharị, ọ dịghịkwa mfe ịmịpụta na mpụta. A na-etinyekarị ya n'okporo ụzọ nwere ọnọdụ okporo ụzọ ka mma, dịka okporo ụzọ ma ọ bụ okporo ụzọ ndị mepere emepe. Mgbochi na-agagharị n'oge ịkwọ ụgbọala dị obere, yabụ ike esemokwu ya na ala pere mpe, nke nwere ezigbo ụzọ ịnya ụgbọ ala ma dabara adaba ọkwọ ụgbọ elu dị elu. Ọrụ ogologo drainage nke ogologo dị mma, ọ dịghị mfe ịmịcha n'okporo ụzọ mmiri, na mkpọtụ n'oge ịkwọ ụgbọala dịkwa obere.
Ọghọm: Therụ ọrụ braking nke taya ogologo oge adịghị ike, ike ịkwọ ụgbọ elu adịghịkwa mma dị ka taya nke usoro ndị ọzọ. Odighi nma maka uzo nwere nsogbu n’adighi nma dika uzo aja.
3. Off-ụzọ ụkpụrụ
Uru: A na-eme atụmatụ ụzọ pụrụ iche iji megharịa ụzọ akọrọ, mmiri mmiri, okporo ụzọ ugwu ugwu na ụzọ apịtị na aja. Tiredị taya a dị ka egwuregwu pentathlon. Ọ nwere ọtụtụ ọpụrụiche ma enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ gburugburu na ihu igwe. Ya mere, ọ bụ taya kachasị mma maka ndị na-eto eto ma ọ bụ Jeep na ụgbọ ala ndị ọzọ. A na-ekewa usoro Cross-country n'ụdị abụọ: usoro ntụzịaka na usoro ntụzịaka, nke usoro ntụzịaka ya bụ ntụpọ mgbe ejiri ya. Off-ụzọ ụkpụrụ taya ndị kwesịrị ekwesị iji na ike ike n'okporo ụzọ, adụ unyi ụzọ na ọ dịghị-ụzọ ebe.
Ọghọm: N'ihi na nrụgide kọntaktị nke ụkpụrụ ahụ buru ibu na nkwụsi ike na-agagharị buru ibu, ọ gaghị adabara maka ịkwọ ụgbọala ogologo oge n'okporo ụzọ siri ike. Ma ọ bụghị ya, ejiji taya ga-abawanye, oriri mmanụ ga-abawanye, mmụba ụgbọala ga-akawanye njọ.
4. Kwụsị usoro
Uru: Ebe ọ bụ na ụkpụrụ ahụ na-agbaso nhazi ihu igwe, ebe a na-akpọtụrụ n'etiti taya na ala na-abawanye. Ma ikike nkwalite na ikike ịnya ụgbọ ala magburu onwe ha, nke na-eme ka adịghị ike nke ogologo usoro ogologo taya. Okwesiri maka ime obodo ojoo na ebe a na-ewu ulo. Ọnọdụ okporo ụzọ.
Ọghọm: Mwepu mmiri na adịghị ike ikpo ọkụ. Na mgbakwunye, taya mpụta na-abawanye mkpọtụ ma na-abawanye mpaghara kọntaktị ala. N'ihe banyere njikwa njikwa ụgbọ ala, o doro anya na ọ dị ala karịa taya ndị nwere ogologo oge.
5. Mudkpụrụ apịtị na snow
Uru: A na-ahazi usoro taya na blocks. Mgbe ụgbọala ahụ na-agba ọsọ na snow ma ọ bụ ala apịtị, ụkpụrụ a na-agbanye miri emi na snow ma ọ bụ ala apịtị, ụgbọ ahụ na-ewekwa ike. Ya mere, ngọngọ ụkpụrụ nwere ihe kasị mma ịnya ụgbọ ala na braking arụmọrụ n'etiti anọ ụkpụrụ ụdị. Otú ọ dị, mgbe ị na-eji ụdị taya a, jide n'aka na ị ga-ewepụsị akara anyị na ụkwụ, ma ọ bụghị ya, ọ ga-emebi ụzọ okporo ụzọ.
Ọghọm: costgwọ nke taya ụdị usoro dịtụ elu, a naghị ejikwa usoro a maka ọnọdụ okporo ụzọ pụrụ iche. Oge a dị oke arọ, taya eji na snow, enwere ike iji ya n'oge oyi, ọ na-ewe ọtụtụ nsogbu iji chekwaa.
Ọrụ nke ụdị taya:
Na nkenke, ọrụ bụ isi nke ụkpụrụ taya ahụ bụ ime ka esemokwu dị n'etiti nzọ ụkwụ na elu okporo ụzọ iji gbochie wiil ndị ahụ ịpụ, nke bụ otu ihe ahụ dịka usoro naanị. Tirekpụrụ taya ahụ na-eme ka ekwedo nke kọntaktị ala ahụ dị mma. N'okpuru ọrụ nke ike dị ike (dịka ike ịkwọ ụgbọ, ike braking na ike n'akụkụ) n'etiti nzọ ụkwụ na n'okporo ụzọ ahụ, ngọngọ ahụ nwere ike ịmepụta nrụrụ mgbanwe dị ukwuu. Mgbe ike dị egwu na-abawanye, nrụrụ mgbagha na-abawanye otu a, yana "mmetụta esemokwu" nke kọntaktị ahụ na-abawanye, si otú a na-egbochi ọchịchọ nke nzọ ụkwụ ịmịpụ ma ọ bụ amị amị. Nke a na - ewepụ ọghọm nke taya na - enweghị akara (ọkụ na - adịghị mfe) nke na - adị mfe iwepụ, na - eme ka arụmọrụ ụgbọ ala metụtara arụmọrụ esemokwu n'etiti taya na n'okporo ụzọ-ike, ịgba ọsọ, njikwa na ịnya ụgbọ ala E nwere ntụkwasị obi nkwa maka egwuregwu nkịtị.
Nnyocha egosiwo na ihe ndị na-ebute esemokwu n'etiti nzọ ụkwụ na elu ụzọ ahụ na-agụnye adhesion n'etiti ebe abụọ ahụ, mmetụta nke ihe na-adọrọ adọrọ, na mmetụta nkwụsịtụ nke ụzọ nke convexity n'okporo ụzọ ahụ, mana isi ọrụ bụ ka ngọngọ agbanwe agbanwe.
Previous: Mụtakwuo banyere taya
Ọzọ: Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ na Kelland